Rastrabani.com | किन अटेर हुँदैछ कर्मचारी खटाउन ? प्रदेशमा आधा मात्रै कर्मचारी - Rastrabani.com किन अटेर हुँदैछ कर्मचारी खटाउन ? प्रदेशमा आधा मात्रै कर्मचारी - Rastrabani.com
किन अटेर हुँदैछ कर्मचारी खटाउन ? प्रदेशमा आधा मात्रै कर्मचारी
काठमाडौँ । सरकारले ७ वटै प्रदेशमा तत्काललाई आवश्यकभन्दा आधा मात्रै कर्मचारी खटाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सातवटै प्रदेशमा सभा र मन्त्रालय भवन व्यवस्थाका लागि १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँका दरले निकासा दिएको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
उक्त रकम भवन रंगरोगन, भाडा तथा त्यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ ।